Iindaba | Eyenkanga 2021
Inkampani, Imfundo Yezempilo Ukuphuma Inkampani, Iindaba Iindaba Iindaba, Impilo Impilo Impilo-Ntle Iziyobisi Vs. Umhlobo Uluntu, Impilo Inkampani Izilwanyana Zasekhaya Ulwazi Lweziyobisi Uluntu, Inkampani Ukuzonwabisa Ulwazi Lweziyobisi, Imfundo Yezempilo
Kuqikelelwa ukuba kwizigidi ezi-6.1 abantwana bane-ADHD e-U.S, ichaphazela amakhwenkwe ngaphezulu kwamantombazana, kwaye amanani abantu abadala e-ADHD ayenyuka. Fumana iinyani ezingaphezulu ze-ADHD apha.
Yeyiphi imeko esempilweni eMelika, kwaye ngawaphi amazwe athi ayimpilo? Fumana ukuba imeko yakho ithini ngokuchasene namazwe asempilweni ka-2019.
Ama-62% amava oxinzelelo, ngophando olutsha lwe-SingleCare
Idatha yethu yovavanyo yoxinzelelo ibonisa ukwanda koxinzelelo xa kuthelekiswa neenkcukacha-manani zangaphambili zoxinzelelo. Funda ngendlela uxinzelelo oluchaphazela ngayo abantu baseMelika namhlanje.
Amanani oxinzelelo ngo-2021
Malunga neepesenti ezingama-31 zabantu abadala baya kuba namaxhala ngexesha elithile ebomini babo. Sisifo esixhaphake kakhulu kwingqondo e-U.S. Fumana uninzi lwamanani oxinzelelo apha.
I-COVID-19 iikiti zokuvavanya ekhaya: Into esiyaziyo
I-FDA igunyazise malunga neekhithi ezingama-200 zovavanyo lwe-coronavirus — ezininzi zinokusetyenziswa ekhaya. Funda ukuba ungalusebenzisa njani uvavanyo lwe-coronavirus ekhaya kwaye thelekisa iikiti zovavanyo apha.
Izibalo zokuphazamiseka kwengqondo okuguquguqukayo 2021
Izibalo zokuphazamiseka kwengqondo okuguquguqukayo: iipesenti ezi-2.8 zabantu base-US bane-bipolar disorder. Iimpawu zihlala zibonisa ngeminyaka engama-25. Ukuncitshiswa kwexesha eliphakathi lobomi yiminyaka esithoba.
Izibalo ze-CBD 2021
I-68% yabasebenzisi be-CBD bayifumana iyasebenza, kodwa i-22% ithi abayithembi. Fumana ubalo lwe-CBD ngqo ngaphambi kokuba uzame eli nyango lendalo.
Ngaphezulu kwe-7% yabantu abadala abanokudakumba, kwaye abantu abancinci abaneminyaka eyi-12-25 banamazinga aphezulu oxinzelelo. Jonga amanani oxinzelelo ngokobudala nangonobangela.
Amanani eswekile 2021
I-11% yabantu base-US banesifo seswekile-umntu waseMelika ufumanisa ukuba unesifo seswekile rhoqo emva kwemizuzwana eli-17. Amanani eswekile ayenyuka. Nasi isizathu.
Uvavanyo lwesifo seswekile lubonisa iimpawu ezisezantsi zobomi kwizigulana ezi-1 kwezi-5
Iimpawu zeswekile kumgangatho wobomi kubaphenduli aba-1 kwaba-5, kwaye iipesenti ezingama-62 zixhalabile ukuba basemngciphekweni we-COVID-19. Bona ezinye iziphumo zophando kunye nezibalo.
Izibalo zokuphazamiseka kokutya 2021
Iinkcukacha-manani zokutya kwihlabathi jikelele zonyukile ukusuka kwi-3.4% ukuya kwi-7.8%. Phantse iipesenti ezi-4 zabasetyhini abafikisayo banengxaki yokutya. Fumana iinyani zokutya apha.
Izibalo zokungasebenzi kakuhle kwe-erectile 2021
Amanani okungasebenzi kakuhle kwe-Erectile atyhila ukuba i-ED emadodeni amancinci ayiqhelekanga kodwa iyanda. Funda malunga nokuxhaphaka kwe-ED ngokobudala, ubukhali, kunye nonobangela.
IBiktarvy yirejimeni entsha ye-HIV evunyiweyo ye-FDA. Izithako zayo (i-bictegravir, i-emtricitabine, i-tenofovir alafenamide) iyayekisa i-HIV ekuphindaphindeni. Funda nzulu apha.
I-FDA ivuma enye indlela engabizi kwi-EpiPen
Ukuphunyezwa kweSymjepi kuyonyusa ukhuphiswano lweemarike kunye nokunciphisa iindleko ze-EpiPen. Funda malunga nendlela ye-EpiPen kwaye ufumane isigqebhezana sasimahla seSymjepi apha.
I-FDA ivuma i-generic yokuqala yeProventil HFA
Ulawulo lwezoKutya kunye noLawulo lweeDrug (FDA) lwanika imvume kwiCipla Limited ukuba yenze i-Proventil HFA generic yokuqala (albuterol sulfate).
Ukuvunywa kwamva nje kwe-FDA kubandakanya iziyobisi kwi-opioid addiction, migraines, MS
I-FDA ivuma uLucemyra kunyango lweziyobisi ze-opioid, iGilenya njengonyango lwe-sclerosis, kunye ne-Aimovig njengeyeza lemigraine.
I-FDA ivuma iTrijardy XR yohlobo lwesibini lweswekile
I-Tridjardy XR yindibaniselwano yamayeza e-3 yeswekile (metformin, linagliptin, empagliflozin). Funda malunga nale nto intsha, kanye-yemihla ngemihla amayeza amiselweyo apha.
Indlela abantu abaziva ngayo-kwaye bayaziphepha-iintsholongwane
Iintsholongwane zikho kuyo yonke indawo, kodwa ezinye iindawo zikhupha abantu ngaphezulu kunabanye. Siqhube uphando ukuze sifunde ngakumbi malunga nokoyika iintsholongwane kunye nezinto ezenziwa ngabantu ukuziphepha.
phezulu ukalwe kwikhawuntara yeyeza elibandayo
Ngaba amayeza abandayo anokunika into engeyonyani
izibonelelo zempilo zeviniga yeapile cider engacocwanga
Kudala kangakanani i-meloxicam kwintengiso
idepho ithatha ixesha elingakanani ukuze isebenze
apple cider iviniga yosulelo lwegwele kulusu